Isticmaal la'aanta hudheelkaaga ilaa garoonka Basel - laga bilaabo 40.- CHF
Basel wareejinta garoonka
Wareejinta garoonka diyaaradaha Zurich
Basel Adeegga Limousine
Adeegga Limousine WEF Davos
Adeegga Limousine Art Basel
Garoonka diyaaradaha ee Basel
Adeegga baabuurta WEF Davos
360 ° Adeegga bedelka martida martida ee Basel
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa adeeg gaar ah sida martida martida ah ee magaaladeena quruxda badan ee Basel. Iyada oo adeegga guud oo dhan ah inta lagu jiro joogitaankaada Basel, waxaanu hubinaynaa in aad diiradda saari karto waxyaabaha muhiimka ah - haddii aad ku aragto Basel ee Old Town, booqasho Kunstmuseum ama shirarka ganacsiga.
Adeegga wareejinta tooska ah ee albaabka ama hoteelka
Isla marka aad Basel tagto garoonka diyaaradaha ama tareenka, waxaanu kaa qaadi doonaa walwalkaaga socdaalka. Waxaan kuu sugeynaa koontaroolka imaatinkaaga oo kaa nadiifinno safarkaaga adigoo ku siinaya boorsadaada ilaa ay noo yimaadaan sedan caawiyo. Laga soo bilaabo halkaas waxaan kuugu martigelineynaa hudheelkaaga ama goobaha dhacdada. Saaxiibkaagu wuxuu ku faraxsanaan doonaa inuu ka caawiyo boorsooyinkaaga ilaa inta uu ka yimaado hudheelka hotelka.
Cadaadis la'aanta ka jirta hudheelkaaga ilaa Basel Basel
Isla markaad rabto inaad joojiso joogistaada Basel oo aad ku socoto garoonka, waxaad ku jirtaa Basel AdeegMar labaad tayada caadiga ah iyo dhammaan suuqyada la heli karo. Waxaa ku filan inaanu kugu wargalinno codsigaaga bedelka ugu dambeyn hal saac ka hor inta aanad ka soo bixin hoteelka. Si aanad uga walwalin helitaanka warqad lacag ku filan oo lacag ah, sida caadiga ah, waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino lacagaha kaararka deynta sidoo kale.
Waxaad si sahlan u sameyn kartaa ballankaaga internetka. Waxaan rajeyneynaa inaan safarkaaga ka dhigo mid wanaagsan oo ammaan ah.
Kooxda adeegga wareejinta ee Basel
Waxaa lagu calaamadeeyay: Basel garoonka Shuttle adeegga limousine
taxi.flughafen Maarso 9, 2017 Maarso 16, 2017 Basel, garoonka Shuttle, adeegga limousine Faahfaahin la'aan
← Garoonka diyaaradaha ee Zurich iyo Basel
BASELWORLD 2018 - Waxay ku haboontahay inay la socoto Adeega Bedel Basel →
Copyright © 2018 , Bixiyaa WordPress, Mawduuc: Weyn ThemeGrill.